Uphi Denmark Strait? Ahlukaniselane oluseningizimu-mpumalanga Greenland kanye enyakatho-west coast Iceland isimo. Ingabe e Nenkabazwe, ububanzi esiphezulu ifinyelela 280 amakhilomitha. It lebhokisi Sea Greenland kanye Atlantic Ocean. It has a wengxenye imikhumbi 230 amamitha ukujula ubuncane. Ubude endaweni amanzi - amakhilomitha angaba ngu-500. Denmark Strait evamile uhlukanisa izilwandle ukuba Arctic Atlantic. Ngokusho ucwaningo nge zokuma kwendawo, imingcele yangempela Strait ayakhiwe eminyakeni ecishe ibe yizinkulungwane 15 edlule.
EDenmark Strait Kuyimpi Second neMpi Yezwe. Omunye umuntu edume kakhulu ezenzeka ngo-May 1941, ke kwaba khona abangu-imikhumbi we-British Royal Navy futhi amabutho asolwandle ka-Third Reich (Kingsmare). Battlecruiser ka wempi waseBrithani, "Hood" ngenxa lezi zenzo, ilimele futhi Umbe impi esheshayo engahlomile kakhulu ezisindayo "Kunyatheliswa Oygen" kanye yempi "Bismarck", lapho British oholwa yempi "iPrince of Wales" ezama ukuvimba pass ngokusebenzisa Denmark Strait e-Atlantic Ocean. Wayala amabutho Third Reich uGünter Lutyens, kanye nayo iBritish - Lancelot Holland, owabulawa kanye neqembu lonke.
Abantu bokuqala abavakashela indawo yakwa-strait, babe amaViking kusukela Norway ababaleka ngemikhumbi ekhulwini IX ezikebheni zabo ngokusebenzisa ogwini lweNyakatho Melika kanye Greenland. Ngenxa izici nesimo sezulu phezu kwamanzi amanzi njalo ukukhukhuleka zeqhwa.
Coast Greenland kanye Iceland, okuyinto bahlanza yi Denmark Strait amawa ezimangelengele, futhi ngokuvamile, ngokusobala ayikashintshi phezu zeminyaka edlule.
Phansi kanye nokujula
Kumele kuqashelwe ukuthi usizo phansi Strait ngempela engalingani. Umbundu phakathi Iceland futhi Greenland has ikhefu kabani ukujula ifinyelela ezingaphezu kuka-300 m, ubuncane - mayelana 150 m Lokhu strait ihlukanisa kusuka eNyakatho ye-Atlantic .. Kukholakala ukuthi we Strait ukujula avareji uyahluka 200-300 m. Nokho, ngemva isifundo eside bamanzi, ososayensi baye bathola ayimigodi ngempela ngokujulile ukuthi kukhona amamitha kunangendlela anamabini amawaka. Yingakho-ke kungenziwa wagomela ukuthi ushintsho we-Danish Strait ukujula zokhahlamba kusuka izinkulungwane 150 kuya 2.9. M.
Umthelela yezenzo zesintu la mazwe has awakuthinti. Ukuthumela e Denmark Strait okujula ongaphakeme. Phakathi imikhakha yokudoba izitsha anqobe, njengoba le ndawo amanzi amumethe eyisinambuzane, kwezinhlobo eziningi zezinhlanzi, ezifana salmon, capelin, ulwe, i-halibut. Denmark Strait kubhekwa zezimboni zokudoba.
Ukuthumela kusenzima ngenxa yokuthi ne izingxenye ekupheleni amawa Greenland njalo ehlukanisa zeqhwa ukukhukhuleka ngase notshwala kamuva. Ezinye zazo yilezi lilikhulu futhi ukumela ingozi eside lwemikhumbi. Ngokuvamile ngemikhumbi ukudoba ngocwaningo kuya emanzini Strait wathumela sezulu, hydrologists futhi ababikezeli bezulu.
izilwane zasendle Underwater
Nezilwane amumethe zasolwandle emanzini abamele. Njengoba sishilo ngaphambili, iqukethe eziningi zezinhlanzi kwezohwebo. It capelin, zama-umndeni salmon nabanye. Phakathi namanye amalungu kwezilwane Denmark Strait uhlalwe ezihlukahlukene zama-imikhomo, ezifana lo mkhomo killer and whale Beluga. Ogwini Greenland ahlele rookery zamanzi kanye nehabhu lwezimpawu.
Kule ndawo amanzi kukhona izitayela ezimbili ezibalulekile. Omunye efudumele - Irminger, amakhaza yesibili - East Greenland. Bahlanganyela nomthelela ekwakhekeni sezulu, kokubili Strait futhi izifunda eziseduze, ie iziqhingi. Ososayensi baye benza okuningi umzamo ukutadisha mass afundwa idatha. Kungani kubo wabonakaliswa uzekwayo kangaka? Konke ilula, idatha ukugeleza, noma kunalokho, ekusebenzelaneni kwabo inquma sezulu aseNyakatho Yurophu ngezindlela eziningi.
Ukuze uqonde ukubaluleka kwalokhu, kubalulekile ukuba uphendule imibuzo ethile. Ngokwesibonelo, kungani kuleli shumi leminyaka elidlule, kukhona ukwehla okuqhubekayo kule lokushisa Danish Strait? Ingabe kunendlela ukubikezela ukuguquka kwesimo sezulu esikhathini esizayo esiseduze? Akukacaci ukuthi ukufudumala noma ukubanda zizakufika sezulu Nordic, kodwa ekutadisheni strait kuzovumela ukuhlaziya indlela eside, futhi isikhathi esifitjhani.
Waterfall ku Denmark Strait
Phakathi "ezikhangayo" Denmark Strait kungenziwa kuphawulwe impophoma kwamanzi. He is enkulu kunazo zonke emhlabeni. Lesi "simangaliso" bemvelo endaweni engamamitha angaphezu kuka-4 izikhathi enkulu kunemicebo ngobukhulu phezulu impophoma. Nokho, lokhu akukhona ukuphela kwento yena luphakeme kunezinye. Inani lamanzi awela base per unit isikhathi idlula ukusebenza yezimpophoma ngobukhulu emakhulwini amanzi izikhathi. Rock eliphumayo kusuka phansi strait ifinyelela ukuphakama kwamamitha ayizinkulungwane ezintathu. Ngahamba naye makehle phansi ukugeleza kwamanzi ye-Arctic Ocean.
Waterfall ezansi Danish Strait ngenxa indawo, amanzi abandayo kanye nokujula at okuyinto kuncane okwaziwayo ngaso, kodwa nokho yabakhanga Ochwepheshe ezivela emazweni ahlukahlukene. Into yokuqala ukuthi ufanelwe ukuqashelwa - izinqubo kumiswa ezifana izenzakalo esiyingqayizivele. izimpophoma Underwater zenzeka ngenxa yokuthi ukuthi lokuphuma phambili okumisiwe usawoti kanye lokushisa amazinga ezingxenyeni ezahlukene olwandle zihlukile, futhi iseduze kukhona emithambekeni kwamanzi ke imithetho yemvelo, amanzi kancane obukhulu is abangenamakhaya ayazika kusukela phansi olwandle. Yiqiniso, akekho lokhu impophoma mathupha abawubonanga ngoba azikwazi ungene.
Biya (umfula): incazelo. Altai Izintaba
Izithelo Ngilusizo tropical
Aluhlaza okwesibhakabhaka e juice yabo: iresiphi ngaphandle ushukela
Ukotini (indwangu) - ukukhetha okuphelele kubantu abakhathalela induduzo nempilo yabo
Indlela ukuvuselela windose ngokwakho? amathiphu Simple kubasebenzisi imfundamakhwela
Angazi ukuthi bangaki izitini iqhuzu wokwakha? Khokha ngaphezulu!